शान्ति सम्झौताको एक दशकः दशवटा सरकार फेरिए, राजनीति संग्लेन « Janata Samachar
शान्ति सम्झौताको एक दशकः दशवटा सरकार फेरिए, राजनीति संग्लेन
प्रकाशित मिति : 21 November, 2017 3:12 pm
तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले बन्दुक विसाएर शान्ति प्रक्रियामा आएको एक दशक पुरा भएको छ । तत्कालीन माओवादी र सरकारबीच २०६२ मङ्सिर ५ गते बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौतामा सरकार पक्षबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही पक्षबाट तत्कालीन नेकपा (माओवादी) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचन्डले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
संविधानसभाबाट संविधान, शान्ति सम्झौता अनुरूप सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधारको पुनःसंरचना गर्ने लगायत विभिन्न विषयलाई एजेन्डा बनाई गरिएको शान्ति सम्झौताको मर्मअनुरुपको परिवर्तन भने दशक वित्दा पनि जनताले पाएका छैनन् । जुन उत्साहका साथ शन्ति सम्झौताले चर्चा पाएको थियो, त्यो अनुरूप देशमा राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति र विकासको खुड्किलोले गति लिन सकेको छैन ।
एकमधेश एक प्रदेशको नाममा अन्तरिम संविधानको विरोध गर्दै मधेस विद्रोह भयो । भारतीय दूतावासको मध्यस्ततामा सहमति भयो । नेपालको आन्तरिक मामिलामा ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गर्दै आएको भारतको हस्तक्षेप राजनीतिक रूपमा खुला देखियो ।
राजनीतिक दलहरू आपसी खिचातानी र अस्थिरताको भूमरीमा रुमल्लिँदा शान्ति सम्झौता पश्चात् देशमा दश पटक सरकारको फेरबदल भयो । सम्झौताको एक दशकको मुख्य उपलब्धिका रूपमा सेना समायोजन भयो । नेपाली नागरिकले संविधानसभाबाट संविधान प्राप्त गर्ने सात दशक लामो चाहना पूरा भयो । तर, यिनै दुई काम गर्न पनि जनताले कष्टपूर्वक लामो समय कुर्नुपर्यो । संविधान जारी गर्नका लागि देशले धेरै मेहनत र कसरत गर्नुपर्यो । संविधान जारी गरेवापत देशले भारतीय शासकवर्गबाट कष्टदायी नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्यो ।
यो एक दशकको बीचमा देशले दुइटा संविधान पायो । २०६३ साल माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भयो भने २०७२ असोज ३ गते सालमा संविधानसभामार्फत नेपालको संविधान घोषणा भयो । तर, संविधानसभाबाट संविधान बनाउन देशले झन्डै सात वर्षसम्म पापड बेल्नुपर्यो । दुई दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो ।
२०६३ मङ्सिर ५ गते सात राजनीतिक दल र तत्कालीन माओवादीबीच बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि औपचारिक रूपमा युद्धको अन्त्य भए पनि त्यसको बाछिटा भने अझैसम्म पनि जारी छ । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा सहयात्री बन्दै तत्कालीन माओवादी र सात राजनीतिक दलहरूले सहमतिको आधारमा २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान भएसँगै शान्ति सम्झौताको मूल मर्ममा टेकेर शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने सहमाति भयो । शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको गठन गरियो । जसले द्वन्द्वकालमा जीर्ण बनेका भौतिक पूर्वाधारलाई पुनःनिर्माण गर्ने जिम्मा पायो ।
सबै राजनीतिक दलहरू २०६४ चैत्र २८ गते संविधानसभा चुनावमा सरिक भए । तर चुनावभन्दा अघि मधेसमा आगो बल्यो । एकमधेश एक प्रदेशको नाममा अन्तरिम संविधानको विरोध गर्दै मधेस विद्रोह भयो । भारतीय दूतावासको मध्यस्ततामा सहमति भयो । नेपालको आन्तरिक मामिलामा ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गर्दै आएको भारतको हस्तक्षेप राजनीतिक रूपमा खुला देखियो ।
६४ चैत्रको संविधानसभा चुनावमा विद्रोही माओवादीले सर्वाधिक जनमत प्राप्त गर्दै पहिलो पार्टी बन्यो । ठुलो पार्टीको हैसियतमा अध्यक्ष प्रचन्डले सरकारको नेतृत्व गरे । ९ महिनाको सरकार नेतृत्वको अनुभव लिन नपाउदै सेनापति प्रकरणबाट प्रचन्डले राजीनामा दिनुपर्यो । त्यसपछि माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बने । बृहत् शान्ति सम्झौताका एउटा हस्ताक्षरकर्ता काँग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको २०६६ मा निधन भयो ।
राजनीतिक दलहरू आपसी खिचातानी र अस्थिरताको भूमरीमा रुमल्लिँदा शान्ति सम्झौता पश्चात् देशमा १० पटक सरकारको फेरबदल भयो ।
प्रचन्ड सरकार पछि सत्ताको लागि राजनीतिक दलहरुमा आलो पालो चलिरहयो । माधव नेपालपछि २०६७ सालमा माधवकै पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बने । सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा दलहरू संलग्न भइरहँदा शान्ति सम्झौतका कामहरू अलपत्र परे । झलनाथ खनालपछि प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी नेता डा.बाबुराम भट्टराईले २०६८ साल चैत्रमा अनमिनको निगरानीमा क्यान्टोनमेन्टमा रहेका १४ सय ६० माओवादी सेनालाई नेपाली सेनामा समायोजन गराए ।
जुन शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनको दोस्रो खुड्किलो थियो । बाबुराम भट्टराई प्रचन्ड नेतृत्वको सरकारमा रहँदा अर्थमन्त्रीको रूपमा लोकप्रियता कमाएका थिए । तर, संविधानसभाबाट संविधान जारी गराउने वातावरण तयार गर्न भने बाबुराम भट्टराई पनि असफल भए । राजनीतिक दलहरूको आ-आफ्नै हठका कारण पहिलो संविधासभा विघटन भयो ।
लामो राजनीतिक अस्थिरतासँगै बहालवाला प्रधानन्याधीश खिलराज रेग्मीको सरकार गठन भयो २०६९ साल चैत्रमा । सोही सरकारले दोस्रो संविधान सभाको चुनाव गरेयो ०७० मङ्सिर ४ गते । पहिलो चुनावमा पहिलो भएको पार्टी तेस्रो शक्तिमा खुम्चियो । दोस्रो संविधानसभाले नेपाली काँग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनायो ।
एक वर्षमा संविधान जारी गर्ने वाचा गर्दै गठन भएको कोइराला सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीबीच २०७१ माघमा संसदभवनभित्रै घम्साघम्सी भयो । कोइराला सरकारले शान्ति सम्झौताका मर्मअनुसार २०७१ माघ २७ गते सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्यो । र त्यसको भोलिपल्ट नै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजीका लागि छानबिन आयोग गठन गर्यो । जबकि यी दुवै आयोग वर्षौँ पहिले बनिसक्नुपर्थ्यो ।
संविधान जारी गर्नका लागि देशले धेरै मेहनत र कसरत गर्नुपर्यो । संविधान जारी गरेवापत देशले भारतीय शासकवर्गबाट कष्टदायी नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्यो ।
राजनीतिक अस्थिरताकै बीचमा देशमा आएको प्राकृतिक विपत्तिपछि २०७२ वैशाखबाट दलहरू फेरि सहकार्यमा जोड गर्न थाले । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीको विशेष पहलमा संविधान जारी गर्ने वातावरण निर्माण हुँदै गयो । २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भयो । तर संविधान जारी हुनु अगावै संविधानमा आफ्ना माग नसमेटिएको भन्दै देशभर विद्रोहको आगो बल्यो । मधेसमा लामो समयसम्म आन्दोलन चल्यो । मधेस आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै भारतले नेपालमा नाकाबन्दी थोपर्यो ।
संविधान घोषणापछि पनि देशमा सङ्घीयता, सीमांकन, प्रदेश सङ्ख्या, नागरिकता लगाएका विषयमा बहस चलि नै रहयो । बहस र आन्दोलनका बीचमा सरकार परिवर्तन भयो र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले देशको बागडोर सम्हाले । शान्ति सम्झौतापछिको आठौँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा संविधान जारी गर्न अभिभावकीय भूमिका खेलेका पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइलाको निधन भयो ।
पहिला समर्थनसहित प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीपछि माओवादी केन्द्रको अविश्वासको प्रस्तावपछि राजीनामा दिनुपर्यो । शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्ड अहिले शान्ति सम्झौता पछिको नवौ प्रधानमन्त्रीको रूपमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचन्डका सामु देशमा तीन तहको चुनाव र जारी संविधान कार्यन्वयनको लागि निभाउनुपर्ने अरू कयाैँ भूमिका निकै चुनौतिपूर्ण छन् ।
र, त्यसअघि संविधान कार्यान्वयन गराउन मधेसवादी दलहरूको माग बमोजिम संविधान संशोधन गराउनुपर्नेछ । जुन काम प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि फलामको च्यूरा चपाएसरह भएको थियो । मधेसी दलहरूलाई सन्तुष्ट पार्नकै लागि केपी ओली सरकारले संविधान संशोधन गर्‍यो । तर, मधेसवादी दलले त्यसलार्इ मानेनन् । दोस्रो संशोधनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेपनि राजनीति संग्लिन अझै समय लाग्ने अवस्था छ ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी गराउने वातावरण तयार गर्न भने बाबुराम भट्टराई पनि असफल भए । राजनीतिक दलहरूको आ-आफ्नै हठका कारण पहिलो संविधासभा विघटन भयो ।
लामो संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दलको हैसियतमा र त्यसपछि भएको निर्वाचनमा तेस्रो शक्तिका रूपमा खुम्चिएको नेकपा माओवादी, एकीकृत माओवादी हुँदै माओवादी केन्द्रका रूपमा जुट्दै र फुट्दै फेरि सत्ताको नेतृत्वमा पुग्यो । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालपछि अहिले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन् ।
संविधानका केही अन्तरवस्तुमा असहमति जनाउँदै आन्दोलनमा रहेको मधेस केन्द्रित दलका मागलाई सम्बोधन गरेर संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउँदै मुलुकलाई समृद्धितर्फ उन्मुख गराउने गहन जिम्मेवारी, शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता प्रधानमन्त्री देउवाको काँधमा रहेको छ ।
सरकारलाई जानकारी गराएरै अमेरिका गएको हुँः राई (भिडियाेसहित)
कुत्सित र पूर्वाग्रहले भरिएका हल्ला र प्रचारबाजीबाट कति पनि प्रभावित भएको छैन । बरु आफनो
नीलाम्बरजी, बाह्रखम्बा रोड किन रुचाउनु भयो ?
राजन भट्टराईका विषयमा त भन्नुपर्ने केही छैन । उहाँ केपी ओलीजीको खल्तीको रङ्गीन रुमाल हुनुहुन्छ
युद्धरत ‘फलाम सिंह’ कसरी बने महागुरु फाल्गुनन्द ?
महागुरु फाल्गुनन्द (विसं १९४२–२००५) लाई फाल्गुनन्द लिङदेन, मुहिङगुम अङसीमाङ० हाङ्सम साम्यो पनि भनिन्छ । उनी
राज्य र व्यवस्थाविरुद्ध खेलिएको त्यो देउसीभैलो
तल, तल मैदानैमा धानको बाला हो, झुल्न थाले अब भने हाम्रो पनि आँखाहरु हो, खुल्न
कुभिण्डो दान गर्ने पवित्रधाम कुष्माण्ड सरोवर…
शब्द/तस्बिरः पुष्पराज अधिकारी हेटौंडा । ८ वर्ष अघिसम्म हेटौंडा उपमहानगरपालिका ९ स्थित कुखुरेनी खोलाको सामान्य बगर थियो यो भूगोल ।…
‘एकीकरण टुंगिन लाग्यो, आमसभालाई तयार रहनुस्’
दोलखा । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले जनअनुसार काम गरिरहेको बताउनुभएको छ । ‘प्रकाश स्मृति…
दुई माओवादी नेतालाई आजीवन काराबास
कम्बोडिया । कम्बोडियाका दुई वरिष्ठ माओवादी नेतालाई आमनरसंहारको आरोपमा आजीवन काराबास सजाय सुनाइएको छ । कम्बोडियामा सन् १९७५ देखि १९७९…
पैसामा जोखिएको विद्वता
नेपाली समाजमा प्रचलित उखान मध्ये एकः ‘पैसा देखेपछि महादेवका पनि तीन नेत्र ।’ यो उखानले वास्तविक समाजको यथार्थ चित्रण गरेको…
सरकारलाई जानकारी गराएरै अमेरिका गएको हुँः…
कुत्सित र पूर्वाग्रहले भरिएका हल्ला र प्रचारबाजीबाट कति पनि प्रभावित भएको छैन । बरु आफनो इमान, नैतिक मूल्यमान्यता, निष्ठा र…
प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियताको त्यो ‘ग्राफ’ नबनोस् ‘पत्तासाफ’
धमाकेदार ट्रेलर र फितलो कथाबस्तुको फिल्म कस्तो बन्ला ? नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार अहिले त्यस्तै भयो भन्दा हतार भयो…
मुटुमा तिमी दुई थियौः ‘आइ लभ यू’ रितु भन्दै लाइभ…
‘शत्रु गते’ सार्वजनिक (हेर्नुहोस् पुरा चलचित्र)
मध्यरातमा गाडी र यात्रु छोडेर ड्राईभर भागेपछि...
गाउँपालिका अध्यक्ष नै भीर मौरी काढ्न पोख्त
फेरि घट्यो पेट्रोल र डिजेल मूल्य
३ दिन बन्द हुने
यस्तो रोमाञ्चक खेल ! (फोटोफिचर)
जन्ती बनेर आउँदै उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री
जेष्ठ नागरिकबारे अन्तरक्रिया
सेनामा अब उपहार निषेध
सन्दीपको व्यस्तताः यस्तो छ तीनमहिने तालिका
२८ हजार अमेरिकी डलर सहित दुई जना पक्राउ
कुभिण्डो दान गर्ने पवित्रधाम कुष्माण्ड सरोवर (फोटोफिचर)